Ukuloba kunye neebhokisi zeethuluzi abavelisi kunye nababoneleli - China ukuloba ukujongana kunye nezixhobo zebhokisi yezixhobo
Ibhokisi yePlastiki yokuLoba
Ibhokisi yesixhobo sokuloba kunye neepateni zokwenza ngokwezifiso. Unokwenza nayiphi na iphethini oyifunayo kumphezulu ukubonisa ubuntu bakho.
Ibhokisi yokuLoba eyiOrange kunye neMhlophe
Umbala weorenji nomhlophe umahluko ubonakalisa ngokupheleleyo incasa yefashoni. Ukuprintwa kumphezulu kugxininisa ubuntu bakho ngakumbi. Ewe ungaprinta uphawu lwegama lakho ukubonisa ixabiso lakho lophawu ngakumbi. Ibhokisi yokuloba eyomeleleyo, esebenzayo kunye nembonakalo. Olu lolona khetho lwakho lubalaseleyo. Inkangeleko intle kwaye uyilo lwangaphakathi lubukhali, lulungele iindawo ezahlukeneyo zokuloba.